Wasiirka Maaliyadda DFS oo sheegay inay dhisayaan Xarun lagu barto dhaqaalaha – Radio Daljir
Abriil 3, 2018 3:46 g 0
C/raxmaan Ducaale Beyle Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in ay dib usoo celinayaan Xafiisyadii lagu qaadi jiray Lacagaha Canshuurta ee Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Tallaabadaan waxa uu ku tilmaamay in ay sare ugu qaadayaan Lacagaha Canshuurta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya soo gala.
Degmada Yaaqshiid ayuu sheegay in ay ka bilaabi doonaan dhismaha Xafiisyada Canshuurta, waxa uuna shacabka ka dalbaday in ay ka qeyb qaataan.
Wasiir Beyle waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan dhismaha iskuul lagu barto Canshuurta iyo Dhaqaalaha si uu qeyb kaga qaato Kobaca dhaqaalaha dalka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay waddo tallaabo waliba oo dalka lagu gaarsiinayo in uu ku gaaro isku filnaashiyo dhaqaale.